ikhaya/11 Windows/Windows 11 -yiphi inguqulelo efakiweyo?
Vangelis8. Julayi 2021
Iinguqulelo ezimbalwa ziya kuvela ngaphambi kohlobo lokugqibela lweWindows 11. Kodwa yeyiphi ingxelo ekhoyo ngoku efakwe kwikhompyuter? Siza kukubonisa apha ukuba ungayifumana njani inguqulelo ekhoyo ngoku PC ifakiwe.
Yeyiphi ingxelo efakiweyo?
I-Windows 11 ilandela i-Windows 10 kunye neenguqulelo ezininzi ezintsha ziya kuvela kuguqulelo lokugqibela. Inguqulelo nganye izisa iimpawu ezintsha ukwenza inkqubo ibengcono.
Kanye njenge-Windows eyandulelayo, kunokwenzeka ukuba ufumane eyona kanye ngaphandle komzamo omncinci inguqulelo ukufumanisa.
Ukuba usebenzisa iWindows 11, uya kufuna ukukhangela amanqaku amatsha nawo. Ubuncinci ngoku ungazibuza ukuba yeyiphi ingxelo endinayo?
Nazi iindlela ezimbalwa onokufumana ngazo ukuba yeyiphi na iWindows oyisebenzisayo ngonqakrazo nje olumbalwa. Nokuba usebenzisa ikhompyuter ye-desktop okanye ithebhulethi yeWindows.
Eyona ndlela ilula kunye neyona ikhawulezayo yokufumana Windows 11 Inombolo yenguqulo kukusebenzisa indlela emfutshane yebhodi yezitshixo Windows + R kwaye unike winver a.
Olunye ukhetho kukuba unako Isitshixo seWindows + nqumama sebenzisa. Uya kufumana lonke ulwazi olusisiseko malunga nekhompyuter yakho.